Famonoana mpivady Sinoa : efa voaheloka tany Sina i Jiang Shao Wei | NewsMada
Famonoana mpivady Sinoa : efa voaheloka tany Sina i Jiang Shao Wei
Efa voaheloka efa-bolana tany Sina i Jiang Shao Wei, 24 taona tompon’antoka tamin’ny famonoana ireo mpivady Sinoa hita faty teny amin’ny hotely iray lehibe eny Antanetibe Ivato, araka ny fanazavan’ny lefitry ny vondron-tobim-pileovana Analamanga, ny Lt Kly Andriantsiferana. Hita tao anaty camera-n’ny tranombarotra lehibe iray eny Ivato izy nividy ireo fitaovana namoany azy mivady…
“Tsy tena fa anarany tamin’ny mbola kely io Jiang Shao Wei io fa Jiang Jing Long no tena anaran’ity Sinoa tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona teny Ivato ity. Ikoizana mihitsy izy satria efa nisy fotoana nigadra efa-bolana tany Sina mialoha ny nahatongavany teto Madagasikara”, hoy ny fanazavan’ny lefitra voalohany ny vondron-tobim-pileovana Analamanga, ny Lt Kly Andriantsiferana nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety teny Ankadilalana, omaly momba ny fahatrarana ity sinoa nahavanon-doza ity.
Nahazo loharanom-baovao ny zandary taorian’ilay vonoan’olona teny Ivato iny ka nihazo teny Amboanjobe satria tonga teny i Jiang saika haka ny vadiny nanaovana vela-pandrika mba hahafahana misambotra azy. Tafaporitsaka izy tamin’io fotoana io nandritra ny fotoana hisamboran’ny zandary sy ny polisin’ny BC azy. Tamin’ny alalan’ny loharanom-baovao hafa indray no nahafahan’ny zandary nisambotra azy tao Andranofasika Ambondromamy, ny alahady teo. Niaiky fa tena namono nahafaty ireo mpivady sinoa teny Ivato niaraka tamin’ireo mpiray tsikombakomba aminy. Nisy olona nananam-bola taminy ka noteren’ny tompom-bola izy mba hamerina ny vola ka izany no nitarika izao vonoan’olona feno habibiana izao.
Voaomana mialoha avokoa ny paikady rehetra hamonoana azy mivady satria hita tao anaty camera de surveillance-n’ny tranombarotra lehibe iray eny Ivato izy nividy ireo fitaovana namonoana ireo mpivady Sinoa. Nisy fotoana izy efa niasa tamin’ny tranombarotra iray lehibe eto an-dRenivohitra.
“Miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ny fampodiana azy na tsia. Ho henjana ny fanaraha-maso sy fisavana ireo teratany vahiny mijanona eto amintsika”, hoy ny lehiben’ny vondron-tobim-pileovana Analamanga, ny Kly Ravoavy Sambatra. Nisy ny gaboraraka matoa tafiditra teto ity sinoa ity?
J.C /Sary : Mamiherison